မြင်နေကြ ပုံစံလေး နဲ့ မတူပဲ BAD GIRL တစ်ယောက်လို အထာကျ လွန်းနေတဲ့ ပိုးမမှီသာ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / မြင်နေကြ ပုံစံလေး နဲ့ မတူပဲ BAD GIRL တစ်ယောက်လို အထာကျ လွန်းနေတဲ့ ပိုးမမှီသာ
မြင်နေကြ ပုံစံလေး နဲ့ မတူပဲ BAD GIRL တစ်ယောက်လို အထာကျ လွန်းနေတဲ့ ပိုးမမှီသာ
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သီဆိုတဲ့ Music ဗီဒီယိုလေးတွေ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရင်း အနုပညာလောကထဲ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုးမမှီသာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ လည်း လုပ်ဆောင်နေကာ ယခုချိန်မှာတော့ နေရာ တစ်ခုထိ ရောက်ရှိအောင်မြင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ လက်ခံ ရိုက်ကူးနေကာ ပရိသတ်တွေ အားပေးထောက်ခံမှု ကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ကျစ်လစ် သွယ်လျပြီး အချိုးအစား ညီမျှနေတာကြောင့် ပုရိသတွေ အကြား ရေပန်းစားကာ အောင်မြင်နေတဲ့ သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောဆို ဟန်ကလည်းချစ်စရာကောင်းပြီး ဟန်ဆောင်မှု ကင်းတဲ့ အပြုံးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားပေးထောက်ခံ နေကြတာ ဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ယခုအခါမှာတော့ အထာကျကျ ပို့စ်ပေးကာ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ချပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြင်နေကျပုံစံ မဟုတ်ပဲ ပိုးမမှီသာ တစ်ယောက် အထာ ကျကျ မိမိုက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေထဲမှာ ပိုးမမှီသာ ဟာ စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့အပြုံး ညို့အားပြင်းတဲ့ အကြည့်တွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရင်ခုန်စေမှာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်ကလည်း ချောမောလှပနေပြီး နိုင်ငံခြား သူလေးလို ချစ်ဖို့ကောင်းနေကာ ခပ်ဆိုးဆိုး ကောင်းမလေးဟန် ပုံလေးတွေ နဲ့အတူ “ဘက်စုံထူးချွန် လူဇိုးမ အမှတ်တရ …. Thanks for 2M views ..”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်လေး တပ်ပြီး ဖော်ပြလာတာကို ပရိသတ်တွေ အတွက်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…..။
ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ သီဆိုတဲ့ Music ဗီဒီယိုေလးေတြ မွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း အႏုပညာေလာကထဲ ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ပိုးမမွီသာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြ လည္း လုပ္ေဆာင္ေနကာ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေနရာ တစ္ခုထိ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြ လက္ခံ ႐ိုက္ကူးေနကာ ပရိသတ္ေတြ အားေပးေထာက္ခံမႈ ကို အခိုင္အမာ ရရွိထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ခႏၶာကိုယ္ကလည္း က်စ္လစ္ သြယ္လ်ၿပီး အခ်ိဳးအစား ညီမွ်ေနတာေၾကာင့္ ပုရိသေတြ အၾကား ေရပန္းစားကာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာဆို ဟန္ကလည္းခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းတဲ့ အၿပဳံးေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အားေပးေထာက္ခံ ေနၾကတာ ဆို ရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ယခုအခါမွာေတာ့ အထာက်က် ပို႔စ္ေပးကာ ႐ိုက္ကူး ထားတဲ့ ပုံေလးေတြ ကို သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ ခ်ျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမင္ေနက်ပုံစံ မဟုတ္ပဲ ပိုးမမွီသာ တစ္ေယာက္ အထာ က်က် မိမိုက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုံေလးေတြထဲမွာ ပိုးမမွီသာ ဟာ စြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့အၿပဳံး ညိဳ႕အားျပင္းတဲ့ အၾကည့္ေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ ရင္ခုန္ေစမွာေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရည္ကလည္း ေခ်ာေမာလွပေနၿပီး ႏိုင္ငံျခား သူေလးလို ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေနကာ ခပ္ဆိုးဆိုး ေကာင္းမေလးဟန္ ပုံေလးေတြ နဲ႔အတူ “ဘက္စုံထူးခြၽန္ လူဇိုးမ အမွတ္တရ …. Thanks for 2M views ..”ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေလး တပ္ၿပီး ေဖာ္ျပလာတာကို ပရိသတ္ေတြ အတြက္ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…..။
Previous post ထိရက်စရာ မရှိအောင် ဖြူဝင်းဥနေ တဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ အသည်းယားစရာ ပို့စ်လေးတွေ မျိုးစုံပေးကာ လန်းနေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
Next post ဒီပို့စ် လေးကို ဖတ်ထား ပြီးရင် သင်ကြိုက်တာ ကို ကြိုက် သလောက် စားလို့ ရပါပြီ